Raw Methenolone Enanthate budada Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Cudurka Metinolone, ama methenolone enanthate, waa daawada isrogen iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo badanaa lagu isticmaalo daaweynta dhiig-yaraaneed sababtoo ah laf-dhabarka lafaha. Waxa kale oo loo isticmaali karaa si loo hagaajiyo jirka iyo waxqabadka.
Qalabka Methenolone ee qasacadaysan (303-42-4) video
Meatenolone Root Mastenolos (303-42-4) Description
Qamadi Methenolone Enanthate powder (sidoo kale loo yaqaan quwada caadiga ah) waa steroids oo lagu duri karo taas oo muujinaysa walxaha anabolic iyo low androgenic khafiif ah, waxay ka tirsan tahay kooxda dihydrotestestoneone (DHT). Qodobka loo yaqaan 'esterthate ester' wuxuu abuuraa xaalad ahmiyad xoog leh oo ka soo baxda steroid-kor u kaca oo joogaya qiyaastii laba toddobaad. Waxaa loo isticmaali karaa daawaynta cudurrada muruqyada lafdhabarka ah, osteoporosis iyo sarcopenia iyo sidoo kale soo-gaadhista corticosteroid oo dheeraaday. Xaaladaha qaarkood, sidoo kale waxay waxtar u leedahay daaweynta kansarka iyo cagaarshow. Magaalooyinka Metenolone waxaa loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1962. Waxa kale oo loo isticmaali karaa si loo hagaajiyo jirka iyo waxqabadka.
Methenolone Mastenolone qasacad (303-42-4) Smamnuucista
Product Name Mastarolka qumbaha ee qasacadaysan
Magaca Kiimikada Cudurka hore ee loo yaqaan "Primary DepotDomapromor", "Methenolone Enanthat"
brand NAme Waaxda Cudurrada ee Primobolan, Nibal Injection
Molecular Wsideed 414.62
barafku Psaliid 67ºC ~ 68ºC
Biological Life-Life IM: 10.5 maalmood
Color Calaamadin cad oo cad
Iska ilaali methanol iyo chloroform
Application Cadaadiska anabolic and andogenogen ee lagu duri karo.
Muxuu yahay Methenolone Root Masteno (303-42-4)?
Methenolone Enanthate budada (sidoo kale loo yaqaano kaydka primollan) waa steroids oo lagu duri karo taas oo muujinaysa walxaha anabolic iyo low androgenic fudud, waxay ka tirsan tahay kooxda dihydrototestosterone (DHT). Qodobka loo yaqaan 'esterthate ester' wuxuu abuuraa xaalad ahmiyad xoog ah oo ka soo baxda steroid-kor u kacda iyo joogitaanka qiyaas ahaan laba toddobaad. Waxaa loo isticmaali karaa daaweynta cudurrada muruqyada lafdhabarashada, osteoporosis iyo sarcopenia iyo sidoo kale soo-gaadhista corticosteroid oo dheeraaday. Xaaladaha qaarkood, waxay sidoo kale waxtar u leedahay daaweynta kansarka iyo cagaarshow. Magaalooyinka Metenolone waxaa loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1962. Waxa kale oo loo isticmaali karaa si loo hagaajiyo jirka iyo waxqabadka.
Sidee Methenolone Root Mashiinka Cusub (303-42-4) shuqullada
Methenolone Enanthate waa steroid liddi kufilan oo ka shaqeeya kor u qaadida guryaha anabolic iyo minimum androgenic. Waxay u shaqeysaa iyada oo samaysa xaalad ah meesha xoog-saarista steroid-ka kacdo oo waxay joogtaa ilaa laba toddobaad. Tani waxay ka dhigaysaa xal fiican oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu xoojiyo heerkooda steroid oo uu sidan ku sii jiro muddo dheer. Qaabka noocaas ah ee methenolone waa mid caan ah sababtuna tahay waxtarka qiimaha iyo waxtarnimada ragga oo raba in ay dhisaan jirkooda qadar sarreeya.
Meatenolone Root Mastenolate (303-42-4) Qaadasho
Qiyaasta daawada loo yaqaan 'promobulin' waa inay ahaato qadarka hore ee 200mg, ka dibna 100mg usbuuc kasta illaa dhamaadka daaweynta. Isticmaalku wuxuu ku xiran yahay xaaladda caafimaad ee qofka isticmaala. Mid ayaa u socon kara 100mg 1 kasta ilaa todobaad XNUM ama 2mg kadib 200 kasta oo usbuuca 2. Aniga waxaa lagu xakameynayaa steroid saldhig sida steroid, dadka intooda ugu badan waxay isticmaalaan ugu yaraan 3gm toddobaadkii ama natiijooyinka ugu fiican. Haddii mid kaliya ay raadineyso wareegga Primobolan, qiyaas ka sarreeya waa mid ku habboon ama faa'iido badan. Shakhsiyaadka intooda badan waxay u baxaan 400 ilaa 750mg wiigii. Thanks to dabeecadda khafiifka ah, qiyaasta sare ee noocan oo kale ah ayaa weli loo dulqaadan karaa iyada oo aan waxyeellooyinka daran ee daran.
Maadooyinka methenolone ee macdanta leh (303-42-4)
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee Primobolan (methenolone enanthate) waa lumis. Waxaa badanaa loo isticmaalaa jarista wareegga taas oo ku haboon in ay ku jirto luminta fatahaada inta lagu jiro mudada gaaban ee qiyaasta. Isticmaalayaasha ayaa, sidaa darteed, waxay filanayaan in ay arkaan isbeddel weyn oo ku jira qaabka dufanka. Waxaa sidoo kale ku habboon in la sii wado xajinta muruqa caanaha oo ah mid muhiim u ah jirka jirka.
Inkastoo marar dhif ah loo isticmaalo wareegga baaskiilka, isticmaalayaasha primi waxay weli filan karaan inay arkaan kororka muruqyada. Waxay noqon kartaa wakiil wax ku ool ah, gaar ahaan marka la xakameynayo steroids kale oo la isticmaalo iyo marka loo isticmaalo qiyaasta sare.
Waxyaalahaas steroid waxay ku shaqeynayaan kobcinta miisaanka nitrogen ee muruqyada. Nitrogar ayaa muhiim u ah koritaanka muruqyada iyo dayactirka. Inta badan nitrogen muruq ayaa heysta, waxay ka badan tahay fursadaha dhismaha murqaha badan. Jidhku wuxuu ubaahan yahay nitrogen marka uu soo saaro unugyada muruqyada cusub, iyo jirkan, steroid, jidhku wuxuu heli karaa nitrogen badan sida uu u baahan doono. Waxay sidoo kale ka caawin kartaa dadka isticmaala inay dhisaan muruqyada cirridka yar yar gaar ahaan haddii ay sameynayaan bandhig ama tartan. Si kastaba ha noqotee, dadku ma rajeynayaan in badeecadaani ay ka caawiso sidii ay u dhisi lahaayeen toban kiiloogaraam maaddaama ay lahaan lahaayeen steroids kale oo xoogan, laakiin waxay ku xisaabtami karaan in la dhiso murqaha cirridka yar yar haddii ay isticmaalaan sida ay tahay.
Marka ay dadku ka fikiraan steroids anabolic, waxay u muuqdaan inay xooga saaraan waxyeelada iyo saameynta ay ku leeyihiin habka difaaca jirka. Qaar aad u yar ayaa u maleynaya in saameynta wanaagsan ee steroids ay ku yeelanayaan nidaamka difaaca jirka. Primo wuxuu horumariyaa qaab nololeed caafimaad leh oo siman. Nidaamka difaaca ayaa muhiim u ah marka ay timaaddo guud ahaan fayoobida iyada oo ka caawisa sidii jirka looga difaaco nooc kasta oo xanuun ah. Cudurka methenolone wuxuu ka caawiyaa kobcinta unugyada unugyada kuwaas oo ay ku jiraan unugyada dhiigga cad, oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah habka difaaca jirka.
Qalabka caawinta muruqyada
Isticmaalida steroid-yada oo kaliya waxay ka caawineysaa gubista baruurta iyo dhismaha murqaha laakiin waxay sidoo kale u oggolaaneysaa isticmaalayaasha in ay sii wadaan muruqyada caatada ah. Dhismaha jirka oo dhan wuxuu ujeedkiisu yahay inuu gubo dufanka, ilaaliyo unugyada iyo haddii ay suurtogal tahay in la dhiso wax dheeraad ah. Arrintani waxay timaaddaa markay isku dayayso in ay gubto marka laga reebo mid ka mid ah in uu galo macdanta caloric micnaheedu waa in ay gubaan dufan ka badan inta ay qaadanayaan. Haddii ay jirtaa, jirku wuxuu ku dhamaan doonaa cunista cunaha muruqyada sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad u jahwareersan . Iyada oo primi, tani ma jiraan sababtoo ah macnaheedu waa steroid macnaheedu yahay in muruqyada caatada ah ay ku sii jiri doonaan.
Iibso methenolone Enanthate budada Buyaas.com
IK Morton; Judith M. Hall (6 Diisembar 2012). Astaamaha Qaamuuska Aasaasiyadeed ee Farageliyeyaasha: Guryaha iyo Iskudhafka. Daadinta Sayniska & Warbaahinta Ganacsiga. pp. 178.
JUCKER '' Horumarinta Cilmi-baarista Daroogada / Foosheerta 'Arzneimittelforschung / Progrès ...
K. Morton, Judith M. Hall. '' Qaamuuska ugu muhiimsan ee Agaasimayaasha Faragelinta: Guryaha iyo Isku-galka Qorraxda waxaa sameeyay Edit Detif Thieme, Peter Hemmersbach. '' Doping in sport. '
Larry Jameson; Leslie J. De Groot (25 Febraayo 2015).Endocrinology: Buug-gacmeedka dadka waaweyn iyo carruurta. Elsevier Health Sciences. pp. 2388.